Shariif Xasan oo kulan Albaabada u xeran la qaatay Safiirka Turkiya, kana dhoofay Muqdisho. | Building Momentum
Shariif Xasan oo kulan Albaabada u xeran la qaatay Safiirka Turkiya, kana dhoofay Muqdisho.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Dowlada KMG ee Soomaaliya oo ay dhawaan xilkiisa ka qaadeen xildhibaano dhowr ah, ayaa Maanta Gudaha garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho Kulan Albaabada u xeran kula qaatay Safiirka Dowlada Turkiya u fadhiya dalka Soomaaliya.
Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Ambasador Jaamaalatiin, ayaa la sheegayaa in ay ka wada hadleen Arrimo dhowr ah oo quseeya xiriirka labada dal iyo waliba arrimaha muranka ka jira ee khilaafka Baarlamaanka Soomaaliya.
Inkastoo kulanka labada Mas,uul aan faah faahin rasmi ah laga bixin ayaa hadana marka uu soo gaba gaboobay kulankooda, waxa ay labada Mas,uul si wada jir ah ula hadleen Ardey ka dhoofeesay Garoonka Muqdisho, kuwaasi oo kusii socday dalka Turkiya oo ay deeq waxbarasho ka heleen.
Labada Mas,uul oo sidoo kale la hadlay Saxaafada ayaa sheegay in ay ka wada hadleen, xiriirka labada dal, iyadoona Shariif Xasan Sheekh Aadan uu sheegay in talaabada dowlada Turkiya ay ku qaadeeso Ardeyda Soomaaliyeed ee tahay mid taariikhi ah oo aan la ilaabi doonin.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa kulankaasi ka dib waxa uu usii kicitimay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi oo kula kulmi doono Diplomaasiyiin ku sugan dalka Kenya.
Lama cadeenin ujeedada safarka Shariif Xasan uu ku aaday Magaalada Nairobi, waxaana safarkiisa ku wehliya xubno ka tirsan Xildhibaanada taageersan.